सुन्दै डर लाग्दो घटना घट्यो, गाउमा रातिनै गुण्डाहरुले गरे सामुहिक आ; क्रमण, गाउले रुँदै मि, डियामा (भिडियो सहित) – Ap Nepal
इटहरी । सुनसरीको दुहबी–९ मा रड भाला प्रयोग गरी सांघा तिक हमाला भएको छ । ठूलो जत्था आएको समूहले हात, कान का टिएको हो । राती करिब ९ बजे गुण्डा गर्दी शैलीमा आएका समूहले आ क्रमण भएको जनाइएको छ । पिडित महिला र प्रत्यक्षदर्सिले त्यो दिनको घbटनाको बारेमा सबै बताएका छन् ।
सामान्य विवाद लिएर ४ सय भन्दा बढी लिएर वडा नं. ९ का वडाध्यक्ष मेहदी हुसेनले आं तक मच्याएको पीडित परिवारले बताएको छ । प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दर्ता गर्न नमानेको भन्दै पिडित मिडियामा आएका छन् । पिडित यस बिषयमा वडाध्यक्षसँग सम्पर्क कुरा हुन सकेन । घटनाको बास्तबिकता के हो ?
सुनसरीको दुहबी–९ मा रड भाला प्रयोग गरी सां घातिक हमाला भएको छ । ठूलो जत्था आएको समूहले हात, कान काnटिएको हो । राती करिब ९ बजे गु ण्डागर्दी शैलीमा आएका समूहले आक्रमण भएको जनाइएको छ । पिडित महिला र प्रत्यक्षदर्सिले त्यो दिनको घटनाको बारेमा सबै बताएका छन् ।
सामान्य विवाद लिएर ४ सय भन्दा बढी लिएर वडा नं. ९ का वडाध्यक्ष मेहदी हुसेनले आंतक मच्याएको पीडित परिवारले बताएको छ । प्रहरी कार्यालयमा जाहेरी दर्ता गर्न नमानेको भन्दै पिडित मिडियामा आएका छन् । पिडित यस बिषयमा वडाध्यक्षसँग सम्पर्क कुरा हुन सकेन । घटनाको बास्तबिकता के हो ?
तल भिडियोमा सम्पूर्ण जानकारी हेर्नुहोला ।
Prevबिदेश गयका श्रीमानलाई सम्झिदै यति मिठा-मिठा गित गाइन,सबैलाइ रुवाइन बिनिताले (हेर्नुस् भिडियो सहित )
Nextजन्म दिनमा अलिफ खान रुदै आए मिडियामा,दिदि पनि रोइन, अलिफलाई लाग्यो यस्तो रोग (भिडियो सहित)